Mhosva yekutanga pasi pano - AFRIKHEPRI
Mwari "akaberekwa" muAfrica
Ani nani anoregerera avo vanoita zvekare havagoni kunyatsotsanangura kuti vanonzwisisa mapurisa ezviripo, sezvo icho chechipiri hachisi chinhu asi mwanakomana wekutanga. Nguva yakareba yapfuura, kwenguva yakareba kwazvo, pasina mubvunzo pamararamiro ehupenyu hwedu, kusati kwamboitika kweropa kuve kwakazunungusa vanhu, kushamiswa uye kutyisa hana dzehana nekuda kwekunyangadza kwayo, utsinye uye kusanzwisisa. Mukumuita iye baba vezvakaipa zvose nekuuraya pakati pevanhu panyika.
Nyaya inoitika mumhuri. Hama mbiri dzinopopotedzana uye imwe inoguma ichiurayiwa. Zvizhinji zvezvitendero zvakazvibvisa uye KUBATSIRA KWEMUNYORWA KUNHU.
MuBhaibheri, (Genesi 4.1 - 15), tinoverenga izvi:
Adhamu aibatana nemukadzi wake Evha. Akava nepamuviri ndokubereka Kaini. Akati, "Ndakapa hupenyu kune murume ane rubatsiro rwaShe." Akaunza zvakare mukoma waKaini, Abheri, kunyika. Abheri akanga ari mufudzi uye Kaini aiva murimi. Mushure mechinguva, Kaini akaita chipo chezvibereko zvenyika kuna Ishe. Abheri akamuita mumwe wematangwe emakwai ake namafuta. Ishe akatarisa zvakanaka kuna Abheri uye nechipo chake, asi kwete paKaini nechipo chake. Kaini akatsamwa kwazvo uye akatarisa. Jehovha akati kuna Kaini, "Sei iwe wakatsamwa uye iwe unotarisirei rima? Zvechokwadi, kana iwe uchiita zvakanaka, iwe uchasimuka. Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchiita zvakaipa, chivi chiri pamusuwo uye zvishuvo zvake zviri kwauri, asi ndewekutonga pamusoro pake. "Zvisinei, Kaini akati kuna munun'una wake Abheri," Ngatiende kuminda "uye pavakanga vari mumunda, akazviwisira pamusoro pake ndokumuuraya. Jehovha akati kuna Kaini, "Aripi Abhero munun'una wako?" Akapindura akati, "Handizivi. Ndiri mutariri wehama yangu here? "Ipapo Mwari akati," Waitei? Ropa remunin'ina wako riri kuchema kubva pasi kwandiri. Kubvira ikozvino, iwe wakatukwa, wakadzingwa kubva pasi wakazaruka kunwa ropa rehama yako rakateurwa neruoko rwako. Paunenge uchirima ivhu, haazokupei zvinhu zvake zvose. Iwe uchange uchidzungaira uye uchidzungaira panyika. "Kaini akati kuna Ishe," Matambudziko angu akawandisa zvokuti haangagoni kutsungirira. Heino uri kundidzinga kubva munyika ino nhasi. Ini ndichavanda pamberi penyu, ini ndichafamba-famba ndichidzungaira panyika, uye ani naani anondiwana achagona kundiuraya. "Ishe akati kwaari," Kana munhu akauraya Kaini, Kaini achatsiviwa kanomwe "uye Jehovha akaisa Kaini chiratidzo, kuti avo vakamuwana varege kumuuraya.
MuSurah 5 (Al Ma'ida, Vhesi, 27-31), Korani inotiudza zvimwechetezvo:
Uye uvaudze muchokwadi chose nyaya yevanakomana vaviri vaAdhamu. Vose vakapa zvibayiro; iyo yemumwe yakagamuchirwa uye iyo yeimwe yakanga isina. Uyu anoti: "Ndichakuuraya zvirokwazvo". "Allah anogamuchira," akadaro mumwe, "kubva pamatanda. Kana iwe ukandiisa ruoko rwako kuti undiuraye, handingakupiri ruoko rwangu kuti ndikuuraye: nokuti ndinotya Allah, Ishe weChiri. Ndinoda kuti iwe uende nechivi chekundiuraya uye nechivi chako pachako: iwe uchava pakati pevanhu vemoto. Uyu ndiwo mubayiro wevasina kururama. Mweya wake wakamukurudzira kuuraya munin'ina wake. Akamuuraya, uye naizvozvo akava umwe wevarasikirwa. Ipapo Mwari akatumira gunguvo rakatsvaira pasi kuti riratidze kuti ingaviga chitunha chehama yake sei. Akati, "Nhamo ini! Ndiri kukwanisa kuva, segungu rino, rinokwanisa kuviga mutumbi wehanzvadzi yangu? "Akabva ava mumwe weavo vakazvidemba.
Zvimwe zvikamu zvina zvinokosha zvemashoko zvinobva mumagwaro maviri: - Ndivana vaAdhamu venyama yeBhaibheri; - Chipo chaizova chiitiko chinokonzera kuurayiwa; - Bhaibheri rinonyatsotaura mazita ehama mbiri, Abheri naKaini uyo muurayi; - Qurani hairevi zita uye inovaidza kuti VADZIDZI vaAdhamu.
The Habil uye Qabil mazita kureva hama mbiri Islamic tsika, ndizvo zvibereko yakakurumbira Kutsanangura vechimoziremu kuti hauna inobva Koran, kana pamusoro Muporofita Islam, asi Al Tabari raakanga Anotozvitsigira pane ndima dzeGenesisi dzataurwa pamusoro apa.
Al Tabari (839 - 923) mubhuku rake rinonzi Korani rinotsanangura (Tafsir Al-Tabari) bhuku chaizvo kufurirwa mubhaibheri Kutsanangura (isra'iliyyat), anoti ndima dzeBhaibheri paakasika kumaketeni yedzimudzangara kuti hazviiti pamwe nemweya wemazwi ari pamusoro apa eSurah 5.
Pakati pemaketani ekutumira, tinogona kutaura maviri:
- "Ibn Humayd akatiudza, maererano naSharma, maererano neIbn Ishâq, maererano nevanyori veBhaibheri".
- "Musa ibn Aroni haazvibatanidzi kwandiri, maererano amr ibn Hammad, maererano Sezvo Sada, maererano Abu Malik, maererano Abu Salih, kubva Ibn Abbas, Ibn Mas'ud sezvo, maererano neboka shamwari Muporofita ".
Ibn Kathir (1301 - 1373) mubhuku rake (Al Bidâya wa Al Nihâya) richasimbisa chete tsika iyi yevaMuslim kutora mazita aKaini naAbheri.
Izvo zvikonzero zvekuurawa maererano neBhaibheri uye Koran
Nokuda kweBhaibheri, chinangwa chekuponda ndechegodo rakaberekerwa nekuramba kwaMwari chipo chaKaini. Nokuda kwemitauro yechiMuslim inobva pane zvinyorwa zveAl Tabari (uye kwete paKoran kana Muporofita), iyo inenge iri nyaya yevakadzi. Zvinonzi Kaini naAbheri vakaberekerwa vaviri pamwe chete nehanzvadzi. Baba vavo vakanga vasarudza kuti vaviri vaizowanana mapatya. Chero dambudziko, mapatya aKaini akanga akanaka kupfuura aAbheri. Kaini akaramba chirevo. Nekuda kweizvi, Kaini akaurayiwa nekuda kwerudo. Kuda kupara mhosva ...
Imwechete raramo haina kufa kuburikidza nenhoroondo yevanhu, kuurayiwa. Kuuraya kunoratidzika kunge kwekutanga munhoroondo uye kwakagumburisa hana uye kwakafananidza kuenderera mberi kwekufamba kwevanhu pasi pano: iyo NIGER KUSVIRWA KUSVIRA KWEMWE NEMAHARA, inowanzodaidzwa kuti EGYPTIAN kana PHARAONIC CIVILISATION.
Hama mbiri nehanzvadzi mbiri kuti vatange! Nzvimbo huru yekugovana !! Inzvimbo yezvematongerwo enyika, zvehupfumi uye hegemonic mukuita gestation !!! Heino chirongwa chenhoroondo !!!!
Osiris! Seth! Isis! Nephthys! Aya ndiwo mavara.
Vose hama nehanzvadzi, vana veGebha, ivo vanakomana vaKuu (شيث), mwanakomana waAtum (Adhamu - آدم). Vose vaiva vanhu, vekutanga uye kwete vamwari sezvazvakanga zvakaita panguva inotevera Ennead Heliopolis.
Iko Korani mumutauro wayo "VANHU VADAM" mukutaura nezvehama mbiri, havakwanisi kunyatsotsanangura, nokuti havazi ivo vakananga mwanakomana waAdhamu asi vazukuru vake vakuru.
Nyaya inotanga nekuparadzaniswa kwenzvimbo pakati pehama mbiri nemadzimai avo: Osiris murume waIsis naSeti murume weNeftys.
Bhuku reOsiris rakagamuchira mune nzvimbo dzinobereka zvikuru dzinosanganisira mativi maviri eGungwa Dzvuku nemipata yavo. Seti akanzwa akanganisa.
Mukuwedzera, vaviri vacho Osiris-Isis vakakomborerwa uye vanofara, asi iyo yaSeti naNefiyty yakanga yakashata uye isina kufara. Panzvimbo yavo, Osiris nemudzimai wake vakanga vakanaka. Vaiziva kufudza mhuri dzavo, kuvatarisira, uye kuvapfekedza nokuti nyika yakanga yakakwana.
Nharaunda dzaSeti dzakanga dzisiri kubudirira. Nokudaro kuberekwa kwekukakavadzana uye kukakavadzana kwakashanduka kuva ruvengo.
Kana tikatorazve zvinyorwa zve mabhuku echitendero, zvichida kusarudza kamwechete nezvose zvavakatendeukira kuna MWARI, asi zvakashata, Seti akarambwa uye akapedza kuuraya hama yake nekumumedza muNairi.
Osiris, akakumbira nemudzimai wake Isis, hanzvadzi yake Nephtys (mudzimai waSeti) akaponeswa kubva panjodzi yekusateerera pasina rubatsiro rwevakachenjera Anubis naThoth. Akange akadzikiswa uye akaenda kusingaperi.
Mwanakomana wake Horus akabata ushe pamusoro penyika yemadzitateguru ake ndokubva ataura nezvemadzimambo akatevera.
Seti aishamwaridzana zvose anozivikanwa kwezvirwere vanhu vake (despotism hasha, mhirizhonga, godo, ruvengo, utsinye, kutambura, chirwere) apo Osiris anokomborerwa raMwari uye murume nokusingaperi.
Hutare Hupo muPre-Columbian America
Zvinhu zvisere zvekuchera matongo zvisiri mumabhuku edu ezvakaitika kare
Pakupera kwaNovember 1960, Lumumba inotorwa. Anonyora tsamba yekupedzisira kumudzimai wake Pauline